Alefaso ny fanadihadiana na andefaso mailaka izahay hilaza amiko ny zavatra takiana, hamboarinay ho anao izany. Famaritana ny vokatra: 1 Business type Manufacturer 2 Malagasy: GB 5237-2008; EN755, Sns, 3 Andian-tsarimihetsika: Mombamomba ny aliminioma ho an'ny fitaovana fananganana sy fitaovana indostrialy. 4 Vidiny: Miorina amin'ny vidin'ny Nanhai Aluminium Ingot(Sokajy://www.lvdingjia.com/)…
Aluminum profile for aluminum tube Send the inquiry or send us an email to tell me the requirements, hamboarinay ho anao izany. Aluminum tube is a kind of non-ferrous metal tube. It refers to a metal tubular material that is hollow and stretched along its longitudinal length with…
Fampidirana ny mombamomba ny Aluminium ho an'ny varavarana & window Send the inquiry or send us an email to tell me the requirements, hamboarinay ho anao izany. ChangYuan Aluminium dia afaka manamboatra karazana varavarana rehetra &mombamomba ny alim-baravarankely ho an'ny tsena any ivelany, manomboka amin'ny fikosoham-bary vita hatramin'ny fanodinam-bolo, electrophoresis and…